आवास कर्जा बढाउँदै बैङ्कहरू | गृहपृष्ठ
Home गृह पृष्ठ आवास कर्जा बढाउँदै बैङ्कहरू
on: April 22, 2012 गृह पृष्ठ
आवास कर्जा बढाउँदै बैङ्कहरू
वैशाख ९, काठमाडौं । वाणिज्य बैङ्कहरूले आवास कर्जामा लगानी बढाउन थालेको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रोभन्दा तेस्रो त्रैमासमा यस्तो कर्जा निकै बढेको अनुमान नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । बैङ्कहरूले यस क्षेत्रमा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा २९ अर्ब र दोस्रो त्रैमासमा ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । पहिलोभन्दा दोस्रो त्रैमासमा आवास क्षेत्रमा भएको लगानी १० दशमलव ३५ प्रतिशत बढी छ ।
‘तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैङ्कहरूको आवासमा भएको लगानी ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्छ,’ राष्ट्र बैङ्कस्रोतले भन्यो ।
तरलता बढ्दै गएपछि बैङ्कहरूले सुरक्षित लगानी क्षेत्र मानिने आवास कर्जा बढाउन थालेका हुन् । बैङ्क अफ एशिया (बीओए)ले दोस्रो त्रैमासमा भन्दा तेस्रो त्रैमासमा ९ प्रतिशतले आवास कर्जा बढाएको छ । बीओएले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा आवास क्षेत्रमा रू. ६६ करोड लगानी गरेकोमा तेस्रो त्रैमासमा बढाएर रू. ७२ करोड पुर्‍याएको छ । ‘यस्तो कर्जा दोब्बर बनाउने योजनामा हामी छौं,’ सो बैङ्कका बिजनेश बैङ्किङ प्रमुख सुजितकुमार शाक्यले अभियानसँग भने ।
बीओएले नयाँ वर्षको अवसर पारेर ११ दशमलव ९९ प्रतिशतमा ‘बीओए सुलभ आवास कर्जा’ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि ऋण लिन चाहनेहरूको सङ्ख्या बढेको जानकारी दिएको छ । सौगातस्वरूप ल्याएको यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकलाई निर्माण लागतको शतप्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने सो बैङ्कले घोषणा गरेको छ । आवास मानिसको आधारभूत आवश्यकता भएकाले यस्तो योजना अघि सारेको शाक्यले बताए । ‘आवास कर्जा लिनेमा ऋण नतिर्ने कमै छन्,’ उनले भने ।
अन्य बैङ्कले पनि सहजै आवास ऋण दिन थालेका छन् । एभरेष्ट बैङ्कले ‘स्वर्णिम निवास’ योजना अघि सारेको छ । बैङ्कका अनुसार घर बनाउन र घर कित्र चाहने ग्राहकले यस्तो ऋण २ वर्षसम्मका लागि पाउनेछन् । सो अवधिभित्र यस्तो ऋणको ब्याजदर नबढाइने बैङ्कको भनाइ छ । यसैगरी लक्ष्मी बैङ्कले आउँदो शुक्रवारदेखि १० प्रतिशतमा आवास कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कले वैशाख महीनाभित्रै आवास कर्जा उपलब्ध गराउन शुरू गर्ने बताइएको छ । ‘केही दिनभित्रै विशेष कार्यक्रम ल्याउँदै छौं,’ नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले भने, ‘आवास सुरक्षित लगानीको क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनेछौं ।’ बङ्गलादेश बैङ्कले घरजग्गा तथा आवासमा कुल लगानीको ५ प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरेको पनि उनले बताए । सिटिजन्स बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले यस बैङ्कको आवासमा भएको लगानी चालू आवको पहिलो र दोस्रो त्रैमासको तुलनामा तेस्रो त्रैमासमा बढेको बताए ।